DAAWO: KENYA, Oo ku hanjabtay dagaal ka dhan ah Soomaaliya.
October 13, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 8
NAIROBI(P-TIMES) – Madaxweyne Kenyatta ayaa gaashaanka u daruuray go’aanka Maxkamadda ICJ ee ku aadan muranka xadka baddeedka ee Kenya iyo Soomaaliya.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa war ka soo saaray xukunkii Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) ay ka gaartay muranka soohdinta badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Qoraal ka kooban afar bog oo la soo saaray fiidnimadii Talaadada, ayuu Madaxweyne Kenyatta ku dhaleeceeyay go’aanka, isagoo si adag u sheegay in Kenya ay gebi ahaan diideyso oo aysan aqoonsan doonin natiijada maxkamadda.
“Kenya waxay dooneysaa inay muujiso inay gebi ahaanba diidan tahay natiijada go’aanka islamarkaana aysan aqoonsanayn. , ”ayuu yiri hogaamiyaha dalka kenya Uhuru Kenyatta.
Kenyatta ayaa intaas ku daray in go’aanka maxkamadda adduunka uu xumayn doono xiriirka Kenya iyo Soomaaliya.
“Go’aankani waa mid aan faaido keeneyn marka la eego xaalada la taagan yahay , taas oo xumayn doonta xiriirka labada dal. Waxa kale oo ay saameyn ku yeelan doontaa guulaha bulsho, siyaasadeed iyo dhaqaale; iyadoo sii xumaysnayso nabadda iyo amniga aan cagaha badan ku taagneyn ee Geeska Afrika , ”ayaa lagu yiri bayaanka.
Uhuru kenytatta ayaa sheegay in Kenya ay arrinta u bandhigi doonto hay’adaha Midowga Afrika sida Barnaamijka Xuduudaha Midowga Afrika iyo qaybaha u qaabilsan Nabadgelyada iyo Amniga.
Madaxweyne Kenyatta ayaa wacad ku maray inuu difaaci doono midnimada dhuleed ee Kenya isagoo carabka ku adkeeyay inuu sameeyn doono wax kasta suuragal ah si uu u ilaaliyo danaha qaranka sida uu hadalka u dhigay.
Cajiib!! Darwiishkii weeynaa ayaa mar uu jabay oo uu Iimeey baqo ku tagey ayaa Waxaa dumarkii iyo maatadii la socotay laga kari waayey khaasatan Dumarkii, Qabiil Oromo ah oo la yiraahdo Caruusa iyo dadyoow kale oo uu meesha ugu tagey!
Wuxuuna maalintaa yiri, hadalkii caanka ahaa ee ahaa. Maanta in aan jabay Waxaan ku ogaaday, YAM YAM IYO QADAAD WEYN AYAA LA IGA KARI LA’YAHAY!!!
Hadda, Soomaali in aay jabtay oo aay weliba si fool xun u jabtay waxaad ku garan kartaa, Kenyankii isku Xaari jiray marka aay maqlaan dhawaqa ka bayaxa Qoriga iyaga aay ridayaan, ayaa maanta Soomaaliya dagaal ugu hanjabaya!!!
Wallaahi Soomaaliya Aniga ayaa u saxiixi lahaa maanta in aan Kenya Xabad wax ku kala goosanno, haddii aan hubo in uusan Gaal diir cadi soo faro geshaneyn, sheekadana Badda oo kali ahi kuma ekaateene, Dhulka a wuu soo geli lahaa!
Weliba Waxaan u saxiixi lahaa, in aanan u raacan doonin wixii aay Xoog inooga qaataan! Saan Cadde yaa dammaanad ka keenayna hee?!!!! Kkk
Arinka ka soo yeeray qadaad weynka kenyatta waa arin ay Soomaalida Dan ugu jiro hadii kenya ay ilaalin waydo oo u hogaan sami weydo go,aanada UN ka hadaba somali waxaa ka ga maqan kenya dhul dad ahaan iyo dal ahaan ka soo jeeda somalia . Hadaba kenya hadii ay kabaxeen sharcigii xuduudaha United nations uyiilay ay diidaan somali waxay diyaar u tahay in ay dhulkoodi ku soo dhacsadaan dagaal, waayo kenya ayaa bilawday ciyaar ay Soomaalida jacelyihiin oo ah DAGAAL WAX KU KEENSO. wallee markaan ayaa la idin yaabaa reer qadaadweyn.
Dhawaan waxa Draw a an a Africa hindisay sharci hawlgalka nabad ilaalinta Somalia ka dhigay mid ay ku shuraako noqdaan Un-ta & Au-du ,lana ballaadhiyo dalalka ciidamadu ka imanayaan.
Haddaba ujeedku waa maxay?
Waa si go’aan ka gaadhista in gudaha Somalia lagusii hayo lagusii adkaynay,hadiiba Somalia u baahato inay iska saartona loo baahdo codaynta midowga Africa & Un-ta,dabadana ay ka riixayaan dalalka galbeedka ee bixiya kharashka ciidamada Afrikaanka ah,oo raba inay diidaan markii la horkeeno golaha ammaanka amaba golaha loo dhanyahay ee Qm,kan AU-dana amar kusiiya in la diido in Amisom laga saaro Somalia,waana caddahay inay dano midaynayaan dalalka ciidamadu ka joogaan Somalia iyo kuwa galbeedkaba oo kuwana rabaan inaan Somalia dawlad ka dhalan,ciidan loo dhisin oo ah kuwa dariska la ah ee dhul soomaaliyeed haysta.
Midda Badda adduunka cudud ciidan kama maaranto inaad Ku difaacato dhulkaaga iyo xuduudahaaga badeed iyo dhuleedba,siyaasad iyo sharci caalami ah oo kaa difaacaya weerar,Ku xadgudub dhulkaaga ma jiro haddaadan haysan cududdii aad Ku difaacan lahayd.
Waxa muuqata in Somalia gumeysi sii gelayso maalinba maalinta ka dmbaysa,ayna kusoo dhiiradeen dalalka deriskeeda ahi,waxna isaga tirinayn maadaama ay gunta soo taabteen waxa meesha ka jira waa Somaliyee,ogaadeena inaanay jirin ciidan hor istaagi kara,dawlad adag oo soomaali Ku wada qanacsantahay.
Caqligoodu ma dhaafsiisna ximin,shan sano kursiga isku warwareeji,Ku qanacsanaan gafuur weynta waardiyaynaysa.
Intaas ayaaba lagu qanacsanyahay oo gobonimo la moodaa oo lagu hadaaqi waa Lana aqoonsanyahay!!!!
Berina in dhulka lagu qabsado ayaa iman oo maxkamad la aado,muranna ay geliyaan dhulkooda sidii badda.
Dawlad awood leh maxkamad ma aadeen,muranna ma geliseen baddeeda we cudud ciidan ayay Ku difaaci lahayd,mana dhacdeenba in lasoo hungureeyo.
Maanta adduunka ma jirto dawlad kaa difaacaysa dawlad kale,hubkii Somalia waa ka xayiranyahay oo xataa caawimo hub culus ma helayso,lamana joogo xataa wakhtigii hub lagu aamini lahaa maafiyada dawladda Sheehan,ciidankeediina isbaarada,muufada Ku dagaalamayo,sidaana dawlad iyo ciidan qaran Ku Sheehan.
Ciyaal suuq baa soomaaliya maanta ka taliya.
Bal fiiri kuwa la baxay Dhalintayo,
Kuwa meelahaas kubada ku ciyaari jiray, haddana tayga noo soo xiranaya iyo kuwa Geela raaci jiray
Walee Soomaali weli been-been ayey ku nooshahay.
Aaway Soomalida mideysan ee Kenya la dagaalamaysa ?
Ma ninka Eelaydii Laascaanood maseyr-dhaqaale awgiis uga soo bixiyey baa kheyraadka badda Kismaanyo dad wax uga
Ma lagu heshiiyey wada-qeybsiga kheeyraadka dalka ?
Sow Puntland ma diidin inay saxeexdo heshiiskii qeybsiga Malaayga iyo kheyraadka kale ee badda ?
Sow Puntland ma dhihin anaa xeebta ugu dheer dalka leh ?
Kheyraadka keliya ee Soomali ku mideysan tahay waa qeybsiga canshuurta Muqdisho
Somalia waxay ka mid tahay waddamadii uu jamaal cabdi naasir ka yiri , “CARABI WAY HESHIITEEN WAXAYNA KU HE SHIIYEEN IN AY WALIGOOD HESHIININ ” hada soomaliya waxay ku heshiiyeen in ay lix maamul goballed ahaadaan oo midba midka kale isku taagnaadaan oo ay is tarxiilaan . Qaarna la dilo si wadar ah Dabadeena ku faanaan anugu waxaan amnigeena ayaan sugeynaa midkale yiraahdo anagu somali manihin midkale yiraahda,
Ciidamada somalia haanaga baxaan gobalkeena midkale yiraahdo . Unakaa xamar leh . Midkale na yiraahdo anaga maanta wixii ka dambeeya may may ayaa nala yiraah oo maxaatiri arki karno. Waxaa layaabi jiray markuu madaxweynihii hore c.qaasim salad xasan uu yiri somalia maqaadan karto maamul federal, hadii kale waxay keeni in ay 20 sano kale ay isku dilaad . Waa waxii ay cadowga waddanka ay kasoo shaqeeyeen, hadaba SOMALIA CIDNA UMA MAQNA CEELNA UMA QODNA , ee illah ha unoqdeen kitaabkana ha ku dhaqmeen oo waxaa midayn kara oo keli QURAAN KA IYO SUNNA NABIGA (SCW).
keenya ma rabto in ay hadda soomaali dagaal la gasho.Waayo dhaqaalaheedaa ku xiran soomaali.Hadduu dagaal bilaamo way wada xirmayaan ganacsiga soomaalida kenya.Kabacdi kenya way is cunaysaa.Sababtoo ah waxaa soomaalida kenya u shaqeeya kiinyaan aad u badan.Haddana waxaa kiinyaanka looga jiraa guryo badan iyo xaafiisyo.
Tan ugu daran keenya waa haddii ay kenya bilawdo dagaal ay la diridho soomaaliya waxay keenya waayi doontaa NFD.Keenya dagaal uma jeedo ee hadalka Uhuru waa falax gootan bilaasha.